Chimiro chemuchina chine kamuri yekuchenesa, gedhi, "Y" track, hoko uye chinotenderedza mudziyo, screw conveyor, hoist, separator, kupfura nzira yekudyisa, pfuti inoputika mudziyo, muunganidzi weguruva, magetsi system, nezvimwe.
Izvo zvakakosha zvemuchina ndezvi:
1. Muchina unotora hapana gomba chimiro, nyore kuisa uye kuderedza mari yekudyara;
2. Compact structure, yakanaka yekuchenesa mhando, basa rakachengeteka uye rakavimbika, kushanda zvakanaka;
3. Kushandiswa kwekaviri dhizaini yekugadzira, imwe hoko mubasa, imwe hoko mune yekunze kutakura uye kuburitsa basa, kugadzirwa kwepamusoro.(chiredzo chimwechete hachina basa iri)
4. Hoko ine masimba matatu ekusimudza, kufamba uye kutenderera kwemukati.
Mamwe marudzi, epakati uye madiki batch yekukanda uye yekugadzira zvikamu uye riveting zvikamu zvepadenga kuchenesa kana kusimbisa, kunyanya kukanganiswa kweatete akatetepa emadziro mativi ekuchenesa kana kusimbisa zvakanyanya zvakakodzera.
Zvakapfuura: Rotary Tafura Shot Kuputika Machine
Zvinotevera: Shot Blasting Machine Kupfeka Zvikamu
simbi inoputika muchina
hanger type shot blasting machine, automatic sh...
pfuti inoputika muchina wemaboilers end sealer
pfuti inoputika muchina weRevolving shell at...
Yemhando yepamusoro hanger, hoko yemhando yepfuti inoputika mac ...
Airless spinner hoko yemhando yepfuti inoputika muchina ...
Kaviri Hook Abrator, Hook Polisher Abrator, Rubber Belt Shot Blasting Machine, Rubber Belt Type Shot Blasting Machine, Kuburikidza neFeed Shot Blasting Machine, abrator, Zvese Zvigadzirwa